Daawo: R/Wasaraha Itoobiya Oo Ka Hadlay Jubaland, Ogadenia, iyo Arimo Badan
Ra’isal wasaaraha wadanka Ethiopia, ayaa markiisii ugu horreysay si qota dheer kaga faallooday ciidamada dalkiisa ka socda ee jooga Soomaaliya, Dhismaha maamulka Jubbaland, faragelinta Kenya ee Jubbaland, dadka Ogadeniya, iyo Heshiis dhexmara Ethiopia iyo Eretria Iyo waxyaabe kale oo badan.
Asigoo si gaar ah u la hadlay talefishinka caalamiga ah ee Al-jazeera gaar ahaan barnaamijka Talk to AlJazera ayuu ra’isal wasaare Hailemariam Desaglend, shaaciyay in lagama maarmaan ay tahay in la kordhiyo tayada ciidan iyo taageerada la siinayo dalka Soomaaliya.
Mar uu ka hadlaayey maamulka Jubbaland ayuu hoosta ka xariiqay in ay tahay shaqo laga doonayo inay hogaamiso dawladda Soomaaliya isla markaana uu kala hadlay madaxweynaha Soomaaliya, iskuna afgarteen sidaas.
Waxaana uu sheegay in maamulka laga dhisiyo Jubooyinka dhamaan beelaha Soomaalida ah ee wada dega Kismaayo inay lagama maarmaan tahay inay kuwada jiraan maamulkaas, waxaana uu meesha ka saarey oo uu beeniyay in dowlada Kenya ay dooneyso in beel gaar ah u gacan geliso Jubooyinka waxuuna ku daray in dhamaan ururka IGAD ay isku afgarteen arintaas.
Halkan ka daawo: R/Wasaare Hailemariam Desaglend wareysigii uu siiyay Al-jazeera
« Fanaaniinta Qurba-Joogta Qaarkood Oo Muqdisha Ka Degay
Tarsan oo soo dhoweeyay maal-gashiga qurbo-joogta ay ka sameynayaan Muqdisho »